Annona ao Thailand ~ Journey-Assist - Guanabana. Noin. Voankazo any ...
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Annona ao Thailandy
Sugar Apple (Annona, Noina, Guanabana)
Any Thailand, ny paoma siramamy dia antsoina hoe Noina, fa raha ny tena izy dia antsoina hoe Annona Scaly, ary ny voankazo "ho an'ny tenany" dia Annona tsotra fotsiny. Voankazo iray tsy mahazatra izy io, mampatsiahy ny paoma iray, fa hafa tanteraka amin'ny tsirony sy ny firafitra. Ny mampiavaka azy koa dia ny tombontsoany ara-pahasalamana lehibe sy ny tsirony mahaliana!
Ny daboka malemy indrindra amin'ity voankazo ity, manandrana kely toy ny misy…. Ho an'ny maro, dia mitovy amin'ny paiso na aprikotsa, ary amin'ny olona iray, mpiambina, na paoma, na paoma mamy (tsoratry ny mpanoratra). Na eo aza izany, tsy dia salama sy matsiro io voankazo io ary zava-poana matetika tsy takatry ny mpizahatany izany.
Vidin'ny Apple Sugar any Thailand
Amin'ny vanim-potoana dia miovaova eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 50 baht isaky ny 1 kg ny vidin'ny noyna.
Amin'ny vanim-potoana tsy fahita firy, i Annona dia tsy fahita firy ary tsy afaka manantena hihaona aminy eo amin'ny talantalana ianao, fa raha hihaona aminy kosa ianao, amin'ny vidiny 70-80 baht isaky ny 1 kg.
Annona Season any Thailandy
Ny vanim-potoana Annona ao Thailand dia maharitra hatramin'ny Novambra ka hatramin'ny Janoary.
Ahoana ny fisafidianana paoma siramamy
Ny tsiranoka noina mora apetraka. Mavesatra, malefaka, ary fotsy nofo tokony ho hita eo anelanelan'ny mizana. Io dia mampiseho mari-pahaizana mendrika.
Arakaraka ny maha matotra ilay voankazo, ny voanjo (mizana) dia manify sy malefaka kokoa.
Aza adino ny mijery mba tsy hahasimba ny voankazo, ny mizana sy ny tohatra. Malemy ny voankazo ao anatiny, ary raha tsy hita ny toerana tsy salama any ivelany dia azo inoana fa tsy mitovy ny ao anaty voankazo.
Ny felan'ny annona masaka dia manana tsy tapaka.
Ahoana ny fomba hihinanan'i Annona?
Ny tena malaza amin'ny fomba fihinanana paoma siramamy dia ny manapaka azy amin'ny antsasaky ary mihinana ny nofo miaraka amin'ny sotro kely.
Fa afaka manatona avy eny amin'ny ilany ianao, ary hisintona flake iray, ary mihinana pulp mivantana avy amin'izy ireo (ny lela sy ny taolana dia tsy azo ihodivirana).
Ny fomba voalohany dia azo antoka fa tsotra kokoa sy haingana kokoa, fa ny faharoa dia mamela fahatsapana mahafinaritra kokoa noho ilay fizotran'izany (asehon'ny mpanoratra).
Noina dia mazoto ampiasaina ho fototry ny voankazo fihinam-boa, ary any Thailandy ianao matetika dia afaka mahita gilasy mahafinaritra avy amin'ity voankazo mahafinaritra ity!
Inona no mahasoa apple paoma
Ny fananana mampiavaka an'i Annona dia ny fisorohana sy fampiroboroboana ny fitsaboana amin'ny fivontosana malemy ary benigne!
Ity voankazo ity na miaraka amin'ny endrika iray na hafa atsetoginin, misy ao amin'ny famoronana azy, dia natokana ho an'ny olona mandritra ny chimiothérapie.
Ny fanafody miorina amin'ny Annona dia ampiasaina am-pahavitrihana amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny diabeta.
Ary koa, ny fampiasana annonas dia misy fiantraikany tsara amin'ny rafi-pitatitra, ary manana fiantraikany sedative.
Teny an-dalana, ny fampiasana ny paoma siramamy dia misy fiantraikany antimicrobial, antiparasitikus amin'ny vatan'olombelona.
Ny hoditry ny ravina sy ny ravan'ny Annona Scaly dia ampiasaina amin'ny fanomanana modely ho an'ny fanodinana ara-batana sy ara-tsaina, ny fiakaran'ny tosidra, ny hatsiaka ary ny asma.
Ny voan'ny Annona dia misy kalsioma goavana be dia be, ary raha azo atao izany dia atokana ho an'ny vehivavy bevohoka ity voankazo ity, satria mitaky ny kalsioma amin'ity fanjakana ity.
Ilaina ihany koa ny fampiasana annon ho an'ny mpifoka sigara sy amin'ny ankapobeny, ho an'ireo rehetra mahatsapa ny tsy fahampian'ny kalsioma.
Eo ihany koa ny fandrafetana paoma siramamy dia misy Niacin, Thiamine, Vitamin C, Riboflavin, Methionine, Lysine.
Any Azia sy Amerika Atsimo, amin'ny fanafody folk, i Anna dia fantatra fa fanafody amin'ny aretina rehetra ...
Sugar Apple Harm
Tsy afaka manararaotra an'io voankazo io ianao. Ny kalsioma tafahoatra amin'ny famenoana dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny olona manana kalsioma sy ny sisa.
Ity voankazo ity dia tena mahasoa ho an'ny vehivavy bevohoka mila kalsioma, nefa indray mandeha tsy azo atao ny manararaotra azy, satria ny kalsioma be loatra dia mahatonga ny taolana amin'ny foetsa, izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasarotana amin'ny fizotran'ny fahaterahana!
Na ahoana na ahoana, ny taolana annonium dia tsy azo hanina. Mety hampahita poizina izy ireo.
Mampidi-doza ny fifandraisana amin'ny jus Annona. Mety hiteraka fahasarotana hatramin'ny fahajambana. Raha mbola tafiditra ao amin'ny masonao ny ranom-boankazo, sasao rano madio amin'ny masonao haingana ny masonao.